:Bọchị: Jenụwarị 17, 2020
Gọvanọ Osman Kaymak gara n'ọdụ ụgbọ oloko Samsun ma kwuo na ụgbọ oloko Samsun-Sivas nọ na ọnwụnwa. Gọvanọ Samsun Osman Kaymak gara n'ọdụ ụgbọelu Samsun ma kwuo na ụgbọ elu ikpe ahụ na-aga n'ihu. [More ...]
Followinggbaso akụkọ EIA kwadebere maka Kanal Istanbul, İBB Onye isi Ekrem İmamoğlu gbara akwụkwọ maka "European Side Reserve Building Mpaghara 1 / 100.000 Scale Environmental Plan Change". Imamoglu, tupu mkpesa ahụ [More ...]
Site na mmezi iwu nke Onye isi ala bipụtara na akwụkwọ akụkọ Gazette nke akara ụbọchị Jenụwarị 17, 2020, nnukwu mgbanwe weere ọnọdụ na Ngalaba Transportgbọ njem na akụrụngwa. N'ime Ngalaba ahụ, ngalaba lọjistik, okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ oloko na njem jikọtara ọnụ [More ...]
Turkey n'ụgbọala Industry Corporation (TÜVASAŞ) 20 n'ihu n'ọrụ ọrụ a notari Olee ihe si na-achọ ịbata oruru na-edeghị ede udomo oro site oghere mmeri na mkpa akwụkwọ magburu ndepụta [More ...]
A na-eme Nzukọ Nzukọ Ọmụmụ Ihe Ọmụma nke 18 nke Ortak a haziri ahazi na ntinye nke ụlọ na mgbanwe na Bursa n'okpuru ndị isi nke Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) ka e mere na İznik. BCCI onyeisi oche Ibrahim Burkay, Turkey akụ na ụba mgbanwe, atumatu na Bursa [More ...]
Nelzọ Ochie, nke na-ebugharị ndị njem n'etiti Karaköy na Beyoğlu, ga-akwụsị njem ya na Jenụwarị 19 n'ihi mmezi na ọrụ ndozi iji nye ndị bi na Istanbul ozi ka mma. Ezie emechiri uzo usoro igba akuko [More ...]
Konya Bicycle Master Plan na-enweta onyinye UNESCO
Konya Metropolitan Municipality mbụ banyere na Ministry of Urbanism na Environment Bicycle Master Plan na Turkey, na a ememe ẹkenịmde ke UNESCO n'isi ụlọ ọrụ dị Paris e ọdịda nke International Nrite İdealkent. Obodo na obodo [More ...]
E weere nzọụkwụ ọzọ dị mkpa na mmezu nke nkwa nke “nnweta ụmụ nwanyị na -akụrụ ụmụ dị n'agbata afọ 0-4 na-agaghị akwụ ụgwọ”, otu n'ime nhoputa ndi ochichi nke Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu. Akparịta ụka na nnọkọ Mgbakọ IMM ụnyaahụ [More ...]
Minista gburugburu na atụmatụ ime obodo Murat Kurum kwupụtara na ha enyochala ihe mgbochi n'oge usoro EIA nke Kanal Istanbul Project ma kwadoro akụkọ EIA ruo taa. Institutionlọ akwụkwọ ahụ jụrụ ajụjụ gbasara Kanal Istanbul Project na ebumnuche dị n'ụlọ Ministrylọ Ọrụ. [More ...]
Karfest, nke ga-akwado ndị mmadụ ihe ọchị na ihe ngosi site na ibe ya na Kartepe, adresị maka njem nlegharị n'oge oyi, ka a ga-eme na Sisli Valley na Satọdee, Jenụwarị 18th n'etiti 14.00-24.00. Ihe nkiri dj agaghị echefu echefu, ihe ngosi ọkụ laser, egwu dị egwu, [More ...]
TransportationPark, nke na-enye ọrụ ụgbọ njem n'okpuru nhazi nke Kocaeli Metropolitan Transportation na Ngalaba Nchịkwa okporo ụzọ, emelitere n'etiti 18 Jenụwarị na 2 nke February n'oge ụgbọ elu na oge nke ngụkọta nke 17 ahịrị n'ihi nkwụsịtụ nke semester. [More ...]
N'ime oke nke ationgbọ njem Master, nke na-eme nyocha maka ikpuchi mpaghara 19, Antalya Obodo ukwu na-enwe nzukọ maka njem njem na ngbanwe nke nsogbu na mpaghara niile gụnyere etiti ahụ. Manavgat nwekwara nsogbu na njem [More ...]
Obodo Ankara na-aga n’ihu na nhicha ọcha ya na-arụ ọrụ maka ụmụ amaala na-eji ụgbọ njem ọha na isi obodo ahụ eme njem na gburugburu ịdị ọcha karị. Gbọ ala ndị dị na EGO General Directorate na-asachapụ n'ime na n'èzí ma fesa ya. [More ...]
nnukwu oyi egwuregwu omume nke afọ Red ehi Homerun, Turkey na-akwadebe ile ihe ndị kasị mkpa skai emmepe. Kedu ụdị ọsọ ị ga-agba? Kedu ụdị ọsọ ị nwere ike ịgba? Ọ dị mma, ị nwere ike ịme ọnụ abụọ? [More ...]